Tuesday September 11, 2018 - 20:42:48 in Wararka by Super Admin
Ugu yaraan 35 qof oo udhashay dalka Nigeria ayaa geeriyooday inka badan boqolaal kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo kadib markii booyad Shidaal ay ku qaraxday goob shidaalka lagu iibiyo oo kutaalla magaalada Nasarawa oo dhacda woqooyiga dalka Nigeria.
Hey’adda Gurmadka degdegga ee dalka Nigeria ayaa ka dhawaajisay in dhacdadan ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhacday goob shidaalka lagu iibiyo oo ku hareer taalla wadada isku xiro magaalada caasimada ah ee Abuja iyo gobollada dhaca woqooyiga wadanka.
Agaasimaha hey’adda gurmadka degdega Nigeria oo lagu magacaabo Usama Axmed ayaa xaqiijiyey dhimashada 35 qof iyo dhaawaca in kabadan Boqol kale kuwaas oo loola cararay goobaha caafimaadka, waxa uuna sheegay in ay suurtagal tahay tirada dhimashada ay sare usii kacdo, maadama ay jiraan dad badan oo ay soo gaareen dhaawacyo Halis ah.
Dadka goobta ku wax yeelobay ayaa lagusoo waramayaa in intooda badan ay kaalinka shidaalka u yimideen si ay ugu gurmadaan, booyada oo dab uu kakacay kadib markii gaari kale ay isku dheceen, balse nasiib daro intii aysan ku guuleysan daminteeda ay ku qaraxday.
Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in dhaawacyo fara badan lasoo gaarsiiyey isbitalka caafimaadka magaalada Nasarawa, suurta galna aysan ahayn in dhammaantood ay wax u qabtaan, waxayna gurmad ka dalbadeen wasaaradda caafimaadka Nigeria oo ay ugu baaqeen in gobolka ay usoo dirto diyaarado Ambulance ah si dadka xaaladooda culustahy loogu qaado magaalada caasimada ah ee Abuja.
Sawiro lagasoo qaaday goobta ay booyada shidaalka ku qaraxday ayaa muujinaya dab xoogan oo oo kaalinka shidaalka ka baxaya, gaadiid gubtay iyo dad dhaawacyo ah oo jirkooda ay ka muuqdaan dhaawacyo kala duwan, kuwaas oo qaarkood ay gubteen.
Senator ka tirsan aqalka Baarlamaanka dalka Nigeria oo dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay, in waxa meesha ka dhacay ay yihiin wax laga argagaxo, isagoona tacsi u diray ehalada dadkooda ay ku geeriyoodeen woqooyiga Nigeria, xukuumadana wuxuu ugu baaqay in goobaha shidaalka lagu iibiyo ay ka saarto magaalooyinka gudahooda oo ay geyso meelo ka baxsan, si looga fogaado arimaha noocaan ah.